Faah Faahin Wafdiga RW Gaas ee Gaaray Baladweyne iyo kulamo Soconaya – SBC
Faah Faahin Wafdiga RW Gaas ee Gaaray Baladweyne iyo kulamo Soconaya
Posted by Webmaster on January 6, 2012 Comments
Ka dib markii Maanta gelinkii hore uu ka degay Magaalada Baladweyne Xarunta Gobolka Hiiraan wafdi heer sare ah oo ka socda DKMG ah islamarkaana uu hor kacayo wasiirka Koobaad ee Xukuumada KMG ah ayaa waxaa halkaasi ay kulamo kula qaateen Dhinacyada Odayaasha gobolkaas iyo weliba Maamulka iminka halkaasi ku sugan ee Dooxada Shabeele.
Markii ay doo degeen Wafdiga Raiisul wasaare C/wali Maxamed Cali iyo Wafdigiisa ayaa waxaa loo sameeyay Soo dhaweyn aad u balaaran, taas oo ay ka qeyb qaadanayeen dhinacyada Odayaasha, waxgaradka iyo dadweyne aad u tiro badan .
Wafdiga raiisul wasaaraha ayaa waxa ay guda galeen in kulamo albaabada ay u xiran yihiin ay la qaataan sarakiisha Dooxada Shabeele iyo Odayaasha iyo weliba Waxgaradka Gobolka, iyagoona ilaa iyo iminka aan jirin warar laxaqiijin karo oo ka soo baxay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Wasiirka Gaashaandhiga DKMG ah Xuseen Carab Ciise oo isagu ka mid ahaa Wafdigii la socday Raiisul wasaaraha ayaa waxaa uu la hadlay saxaafada Baladweyne isagoona sheegay in uu si aad ah ugu faraxsanyahay la wareegista ay DKMG ahi la wareegtay Magaalada Baladweyne, waxaanu intaasi raaciyay in ciidamada Qaranka DKMG ah ay sii socondoonaan gaarayaana gobolo badn oo ka tirsan Dalka kuwaas oo ay ku sugan yihiin xarakada Alshabaab.
Marka laga yimaado Kulamada uu wafdigu qaatay ayaa hadana waxaa xusid mudan in raiisul wasaare Gaas uu ku wareejiyay mid ka mid ah Xildhibaanada DKMG ee ka soo jeeda Gobolka Hiiraan laguna magacaabo Xildhibaan Amiin Deeq Dawo ah oo loogu talagalay Dadka reer Hiiran.
Sikastaba ha ahaatee Imaanshiyaha magaalada Baladweyne Raiisul wasaaraha DKMG ah ee Soomaaliya waxa ay ka dambeysay markii halkaasi ay gacanta ku dhigeen ciidan ka tirsan kuwa Dooxada Shabeele iyo kuwo Itoobiyaan ah.